Nwelite WhatsApp ọzọ ga-enye anyị nkeji 5 iji hichapụ ozi | Akụkọ akụrụngwa
Ọzọkwa na nwayọ nwayọ, ụmụ okorobịa na Facebook na-akwadebe mwepụta nke ọrụ ọhụụ, ọrụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na-atụ anya ya, ọkachasị maka ndị na-ede akwụkwọ wee chee. Mmelite na-esote ga-ekwe ka ndị ọrụ niile nke ikpo okwu izipu ozi ihichapụ ozi ezigara, ee, naanị n'oge nke mbụ 5 nkeji mgbe ezigara ha.
Mgbe oge ahụ gasị, ọ bụrụ na mgbaghara ahụ buru oke ibu, anyị nwere ike wepu aha na ya ma ọ bụ gaa biri n'ọzara na-eche mmegwara ma ọ bụ mmegwara. Mana ihe dị ka nhọrọ dị oke egwu nwere ihe ọ bụla, dịka ihe niile na ọ bụ ya Ngwaọrụ abụọ ga - enwerịrị ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ, nke na-enye ohere a.
Ọ bụrụ na ihie ụzọ zipu ederede ị manyere ka ihichapụ, ma ọnụ gị ma onye nnata ga-enwerịrị ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, a ga-ahapụ ozi ahụ na-enweghị ohere nke ihichapụ. Ọ dabara nke ọma, ma gam akporo ma iOS bụ ọrụ maka imelite ngwa na nsụgharị kachasị ọhụrụ n'ọtụtụ oge, yabụ anyị nwere ike ịtụle ya dị ka obere nsogbu, ọbụlagodi mgbe nhọrọ a malitere itinye.
1 Otu esi ehichapụ ozi nke WhatsApp zitere
1.1 Hichapụ ozi ezigara na iPhone na Windows Phone
1.2 Hichapụ ozi zitere na njedebe gam akporo
Otu esi ehichapụ ozi nke WhatsApp zitere
Na-echeba ihe m kwuru n’elu, Yana mmachi oge nke a na-enye site na ikpo okwu, ọ bụrụ na anyị chọrọ ihichapụ ozi ezitere anyị ga-aga n'ihu dị ka ndị a.
Hichapụ ozi ezigara na iPhone na Windows Phone
Naanị anyị ga-pịa ozi ahụ iji họrọ ya wee pịa Kagbuo. Ọ bụrụ na bibie, WhatsApp ahọrọla iji okwu a dị ntakịrị kama nke okwu ichicha, eji ọzọ colloquially na na onye ọ bụla na-aghọta oge mbụ.
Hichapụ ozi zitere na njedebe gam akporo
Ihichapụ ozi na gam akporo, usoro a dị ntakịrị karịa, ebe ọ bụ na anyị ga-pịa ozi ahụ iji họrọ ya wee pịa bọtịnụ menu, nke dị n'elu nkata ahụ pịa Kagbuo.
WhatsApp agaghị egosi anyị n'oge ọ bụla na ehichapụ ozi anyị, yabụ ọbụlagodi na mbụ, anyị ga-agafe mkpịsị aka anyị wee kpee ekpere ka ehichapụ ozi ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nwelite WhatsApp na-esote ga-enye anyị nkeji 5 iji hichapụ ozi
Samsung Pay ruru Banco Santander na ndị na-ama Apple ụgwọ